Global Voices teny Malagasy » Shina: Tsy Mahataitra Ny Fanapahan-kevitry Ny Twitter Hanivan-tena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2012 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Ny fanambaran'i  Twitter ny Alakamisy teo fa hanomboka hanivana ireo votoaty ao anatiny izy araka ireo lalàna mipetraka, ireo fandrindràna sy ireo politika n'ny firenena tsirairay izay ahitana mpampiasa Twitter dia narahan'ny rehetra, tsy ireo mpampiasa aterineto Amerikana  irery ihany, fa norasahana hatrany lavitra any tahaka an'i Shina.
Na dia mbola voasakana  aza ny Twitter any Shina, ireo mpampiasa ny vohikala amin'ny teny Sinoa, vondrona marolafy  iray, dia nihetsika faingana mba ho loharano handrisihana ny olona handika  [zh] ny fanambaran'ilay orinasa sy hikaroka ny mety ho dikan'izany—ny Twitter.cn, ohatra, na, araka ny vinavinan'i Ai Weiwei , raha tonga ny fotoana hihetsehana hitadiavana sehatra iray vaovao hafa izay manana fanajàna bebe kokoa ho an'ny mpampiasa azy  [zh].
Wen Yunchao , mafana fo iray fanta-daza ao amin'ny Aterineto avy any Guangzhou izay ankehitriny dia miasa anatinà fanaovana sesintany ny tenany ao an-toerana ihany any Hong Kong amin'ny maha-mpamokatra anatina foibe TV vaovao azy, dia namoaka ny heviny momba ireo fepetra vaovao fanivanan'i Twitter ao amin'ny kaonty Twitterany (@wenyunchao) ora maro lasa izay:
1.  Avy amin'ny fijerena ny fanambaran'ny Twitter, fivoarana izany. Teo aloha, voafafa ny bitsika iray noho ny fangatahan'ny governemantanà firenena iray, mahatonga na iza na iza tsy ho afaka hahita izany intsony. Ankehitriny, ireo mpampiasa aterineto any amin'izany firenena voafaritra izany ihany no tsy afaka mahita io vaovao voakasika io.
2.  Tsy hisy fiatraikany eo amin'ireo mpampiasa ny teny Sinoa ny politikam-panivanana vaovaon'ny Twitter. Tsy mora ho an'ny Twitter ny hamantatra avy amin'ireo fitaovana teknika hoe iza amin'ireo mpampiasa azy no avy any Shina, satria mila mandalo ny GFW  izy ireo mba hidirany ao amin'ny vohikala, izay midika fa tsy hanana fahalalana betsaka ny orinasa hahafantarany hoe iza any Shina no hosakanana tsy hamoaka ny vaovao alefany.
3.  Raha manapa-kevitra ny hanangana teti-piasana any Shina ny Twitter, misy sakana roa raha kely indrindra mety tsy hahatanteraka izany. Ny voalohany dia tsy misy fomba hamahana ny fifandirana misy eo amin'ireo mpampiodina ny boaty maintin'ny fanivanana sy ireo fampanarahan-dalàna mangarahara. Raha tsy hoe hanao tahaka ny Google ka hametraka “joint venture”, karazana zana-sampana any Shina, hisy ny fanenjehana amin'ny lalàna ireo mpampiasa rehetra izay voatsimpona amin'izany.
4.  Ny faharoa dia ny hoe na ohatra aza ka manana tsindrin'entana betsaka – PR (Public Relation, mpikarakara ny serasera amin'ny daholobe) manerana ny governemanta noho ny Sina  ny Twitter, tsy mbola afaka loharano sy fitaovana goavana be tahaka an'i Shina ny Twitter hanivànana ireo vaovao. Na ireo manampahefana Sinoa aza tsy hamela sehatra fiadinkevitra tahaka an'i Twitter, misokatra malalaka lavitra noho i Sina, hanome tolotra avy ao anatin'i Shina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/30/28202/
 Ny fanambaran'i: http://blog.twitter.com/2012/01/tweets-still-must-flow.html
 lalàna mipetraka, ireo fandrindràna sy ireo politika: http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304793504576429864270424004.html
 mpampiasa aterineto Amerikana: http://jilliancyork.com/2012/01/26/thoughts-on-twitters-latest-move/
 vondrona marolafy: http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/01/23/as-china-reins-in-microblogs-dissidents-find-haven-on-twitter/
 ho loharano handrisihana ny olona handika: https://twitter.com/#!/WLYeung/status/162736231652929536
 izay manana fanajàna bebe kokoa ho an'ny mpampiasa azy: https://twitter.com/#!/aiww/status/162727816092327941
 Wen Yunchao: http://www.nytimes.com/2011/10/30/magazine/the-dangerous-politics-of-internet-humor-in-china.html?pagewanted=all